Hevitra MPANOHARIANA | Janoary 2009 |
[updated]Izay fantatro tamin'ny tontolon'ny Asabotsy 24 janoary 2009
2009-01-24 @ 11:06 in Politika
Mialoha ny ilazana ity andro ity dia tsara ihany ny manamarika ny andro fiomanana aloha. Nandritra ny tontolo tolakandro isaky ny adiny iray dia nivoaka hatrany tamin'ny RNM sy ny radio MBS ny fanambarana nataon'ny Prefe teto Antananarivo milaza ny tsy maha-ara-dalàna ity fivoriana hotontosaina ny andron'ny Sabotsy ity. Nivoaka tamin'ny TVM matetika ihany koa ilay filazana fa tsy fantatro loatra ny fahatetehany. Saiky ny fampielezam-peo sy ny fampielezan-tsary rehetra teto Antananarivo tsy misy anavahana kosa no namoaka ny fanambarana rehefa tamin'ny fotoanan'ny vaovao takariva isak'ireo foibe ireo. Fantatra mazava tsara izany fa fampitahorana ny olona tsy tia ra latsaka ho tonga eny, na ireo manahy ny sao ho faty ho tonga eny. Na ahoana na ahoana filazan'ny hafa vitsy noho ny olona nanatrika teny Ambohijatovo tamin'ny heriny ny olona tonga teny Ambohijatovo tamin'ity indray mitoraka ity. Mariho tsara fa tsy milaza toeran-kafa velively aho (13 mey na Behoririka izay tsena isan'andro ampovoan'arabe sy manakan-dalana mihitsy aza indraindray) fa ny eo Ambohijatovo, ilay toerana nivoriana ihany no lazaiko etoana.
Mbola ho avy ny sary hafa nefa mampahatsiahy ny 1939-1945 kosa izao sary avoakako izao!
Tamin'ny gazety "Ny Vaovaontsika" omaly ihany koa no nahitana fa nanao valandresaka tany Antsiranana ny Ben'ny tanànan'i Toamasina teo aloha Roland Ratsiraka, ary tany no efa nilazany sahady fa hitondra ny tolona hatramin'ny farany ny Ben'ny tanànan'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tsy mahagaga loatra noho izany raha efa nitabataba sahady ny zavatra tokony hijanona ho tsiambaratelo ny lehilahy. Nahasahy niteny aza izy fa izy Roland Ratsiraka no nanolo-kevitra an'i Andry Rajoelina hanao ilay fotoam-pivavahana iraisam-pinoana notontosaina tamin'ny 11 janoary lasa teo, tsaroako avy hatrany ilay lohateny efa nosoratako teto hoe: "Sao vavaka fihatsarambelatsihy?". Ho fiarahana mitolona hoy ny lehilahy, na dia tokony hanao tolona isam-paritra aza ny mpanao politika dia tsy hitarika ny ao Toamasina izy fa aleony mamonjy an'Antananarivo, tahaka ny milaza hoe: "hanara-maso an'i Andry Rajoelina aho sao dia tsy manao izay noteneniny akory izy!". Mahalasa vinany ahy ihany manko ny itiavany mankaty, sa entina ilazana amin'Antananarivo fa manohana an'i Andry ny any amin'ny faritany?
Miresaka faritany izay ihany, dia efa nanambara mialoha ny tao amin'ny VIVA Radio fa efa betsaka ny avy any amin'ny faritany no ho tonga hanatrika io andro sabotsy io, ary misy ohatra ny avy any Vakinankaratra sy ny teraka avy any no ho avy eo; toy izany ihany koa ny terak'i Toliary. Ny andro mialoha io koa anefa dia misy ny fikambanan'ny avy any amin'ny faritra any, fikambanan'ny tangalamena manana ny anarana hoe "miverina an-doharano", milaza ny fanohanany an'i Andry Rajoelina satria mitondra ny mafaitra tokoa izy ireo raha roahina amin'ny tanindrazany (ilevenana) fa ny vahiny indray no manjaka ao. Mahatsikaiky ity toe-javatra iray ity: raha efa naka ny any amin'ny faritany ny ao amin'ny TGV hanatrika ny fotoanany eto Antananarivo tsy manan-jò intsony hanameloka na hiampanga ny TIM ho maka olona avy any amin'ny faritany amin'ny herinandro ho avy io raha hanatontosa ny azy ihany koa ry zareo amin'ny Asabotsy 31 jnaoary. Ny fanaon-dRatsiraka, fony nitokona 1991 ny teto Antananarivo no nataony ho toy ny fampifanandrinana ny mponin'Antananarivo amin'ny avy any amin'ny faritany. Hevitrevero anie raha Ravalomanana no naka 'tangalamena' hilaza fanohanana azy tahaka izay nataon'ny Ben'ny tanànan'Antananarivo tamin'ity fotoana ity.
Noho ireo toe-javatra ireo, ataoko fa nitaintaina ihany ny roa tonta hiatrika ity andron'ny androany ity. Inona no hitranga? Tamin'ny 5:30 maraina, avy kely ny orana, fa nisava ihany izany avy teo. Ny zoma anefa efa nisy orana naharitraritra ihany ny folakandro. Ho ratsiratsy izany ny bozaka eny Ambohijatovo. Tonga ny ora nandrasana, samy mamatrapatraka ny "fanadihadiana" ataony amin'ny radiôny tsirairay amin'izay ny roa tonta mifanandrina eto amin'ny tanàna. Ny Viva radio sy ny Radio Mada (tsy RNM velively ity Radio Mada ity fa ny radion'ny Groupe Tiko voalohany araka ny fahalalako azy ary mifanila na iray birao amin'ny radio fahazavana aza). Misy hafetsena ihany ny nanaovana ny Radio mada hifamaly ara-panadihadiana amin'ny VIVA radio, fa tsy ny MBS no nanaovana izany fifamaliana izany: ny Radio mada manko dia miorina eny Faravohitra ary ampitan'ny tranon'ny filoha aza araka ny fahalalako azy. Mampihomehy ny ataon'izy ireo: ny iray milaza hoe efa feno olona ety Ambohijatovo amin'izao fotoana izao moa ny iray kosa mamaly hoe mbola vitsy dia vitsy ny olona tonga ao Ambohijatovo ao. Ny iray efa miteny fa amin'analina no vory lanona, ny iray kosa manambara fa tsy mbola nahazo ny olona azony tamin'ny heriny akory i Ambohijatovo. Fa inona moa no mitranga?
Amin'ny ankapobeny dia mizara roa ireo mpitolona, ny sokajy voalohany dia ireo tsy matahotra ny hipetrapetraka anaty fefy (tena sarotra tokoa ny fivoahana avy ao amin'ny zaridaina raha misy ny loza araka ny fomba fiteny) ka ilay fanaovam-pety ery ambony atsinanana ery no misy azy ireo. Ny sokajy faharoa kosa dia ireo olona mijoro afovoan'arabe manoloana ny Planete terrasse na la marquise teo aloha ka hatreo amin'ny zaridainan'ny tsangambato MDRM miandry ny fihavian'ny Ben'ny tanàna sy manakana ny fiara rehetra tsy hananika an'Ambohijatovo. Tsy tokony ho nisy olana akory anefa raha nizotra tamin'izany ihany ny fiara ankoatra ny tahotra fandrao mahatsiaro vasoka amin'ny isan'ny olona tonga teny angaha raha hitan'izay mandalo eo. Ny eo antenantenan'ireo sokajy roa voalaza ireo dia babangoana ihany. Izay no asehon'ny sary ary jereo tsara ny aloka sao dia lazaina ho tamin'ny 9 ora io nefa ny TV Plus madagascar dia nanambara mazava fa tamin'ny folo maraina vao nanomboka niditra ny olona noho ny tahotra sao dia misy mpitandro ny filaminana ihany mety handrava azy ireo. Io ihany koa no mety mahatonga ny olona tsy mety hiditra ny kianjan'ny demaokrasia (iniako soratana hoe demaokrasia fa tsy demokrasia).
Mazava loatra fa midelira mihitsy ny mpanohana azy rehefa tonga ny Ben'ny tanàna tamin'ny 11 sy sasany, mampieritreritra ahy hanao hoe izany tokoa ve moa rehefa entin'ny fo? Eo amin'ny sokajy faharoa nolazaiko teo isika: Raikitra amin'izay ny Ben'ny tanàna manao ny marika V, fa ny tsy azoko ny ankamaroan'ny sary azo tamin'io fotoana io dia nampahatsiahy ahy olona hafa saingy tsy misy ilay volombava kely, ilay ambany orona izany, iny fotsiny (fahatsapana noho ny fankahalana kosa angamba ny ahy?) nefa tena mahatalanjona ny fitoviana. Miara-miakatra mamonjy ny sokajy voalohany amin'izay ny mpitsena sy ny tsenaina. Izaho kosa mbola variana tamin'ity sary azoko, sady nihomehy ihany hoe: ahoana koa ity? Nanapa-kevitra ny hody avy hatrany aho handefa ny sary azoko... sady tsy noraharahiako intsony izay hamaroany any. Izany fodiako izany, satria tsy mieritreritra ny hahita zavatra hafa aho no nahatonga ahy tsy hanana ny sarin'ny teny @ 13 mey androany Asabotsy 24 janoary 2009. Mbola hitady any amin'ny namana hafa anefa aho na dia izany aza.
Fa nahoana angaha no nifindra teny @ 13 mey ry zareo? Voalohany, sarotra be io kianjan'Ambohijatovo io noho ny fefy manodidina azy. Faharoa, mety ho tsikaritra avy hatrany fa nihena ny isan'ny olona tonga ka mety hahakivy izay manatrika eo raha hiverimberina ela loatra;ny vahaolana amin'izany dia ny fitadiavana fanentanana ny olona indray ka ny fandehanana mankeny amin'ny 13 mey no vahaolana amin'izany. Ny fahatongavana eny @ 13 mey ihany koa dia manambara ny finiavana hanongam-panjakana sady mampangovitra hatrany izay mpitondra fanjakana anaovana izany. Nitaky ny fialan'ny mpitondra rehetra amin'izay izy: tsy mahalala ny antony aho satria mba nomeny antony ihany izay fitakiana rehetra. Efa noalzaiko ihany moa tamin'ny voalohany fa nikorokotroka ny varatra tamin'ny fotoana nanambarana ny fankanesana ho any @ 13 mey ary tamin'io fotoana io ihany no nisy izay tao anatin'ny ora maromaro.
Nilaza amin'izay izy fa mikatona ny sekoly rehetra, na miankina na tsy miankina na ara-pinoana manomboka ny alatsinainy... ny resaka an-trano no mamehy fa tsy hisakana an'izany velively ny sekoly katolika nefa amin'ny alatsinainy isika mahita azy. Ny fanontaniana dia hoe ahoana no hanidian'ny TGV ny sekoly amin'izay? Hitety sekoly ve ka haka izay mianatra ao? (io ilay teneniko hoe kidnapping satria halain-dry zalahy izany ny zaza tsy ampy taona raha tsy misy anavahana ny sekoly hakatona). Ny fanao any amin'ny Anjerimanontolo migafy izany no atao raha tsy manaiky ny olona? "Vive la democratie!". Antsoiny ihany koa ny mpiasam-panjakana ary nambarany fa efa vonona amin'izany ny mpiasan'ny Jirama ohatra (kisendrasendra ve fa indroa tapaka ny jiro ny zoma ka tao anatin'ny fotoanan'ny vaovao hariva no nahatapahan'izany teto an-tanànanay ary ny fahatapahana faharoa kosa dia tamin'ny fotoana hanombohan'ny fandaharana invité du zoma tao amin'ny TV Plus nanasana ny mpitondra tenin'ny TIM.
Fa ny zavatra iray mahavariana dia hoe: Nahoana ary ny Ben'ny tanàna no toa sahisahy tsy matahotra ny hosamborina aza raha ny fijery azy? Misy ihany ny ahiahy fa mety manana hery miaramila ambadika ny lehilahy matoa tsy sahy kasihina. Asa anefa?
Operation Prison Break sy mandika ny lalÃ ny ny FFKM raha...
Fanambaran'ny Sefafi 24 desambra 2008 momba ny Viva
2009-01-03 @ 10:26 in Politika
Araka ny maha-VETO ny VETO dia miezaka ny hampita izay rehetra mety hifandraika amin'ny tantaram-pirenena izy, na dia misy aza ny tsy fitovian-kevitra. Ity soratako eto ambany ity ary ny fanambaran'ny Sehatra Fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny SeFaFi (Observatoire de la Vie Publique) manana ny foiben-toerany ao amin'ny Lalana Rajakoba Augustin Ankadivato Antananarivo. Sofindavitra: 22 663 99 sy Fax: 22 663 59 ary ny adiresy imailaka mrcabram@moov.mg
Marihina fa nadika tamin'ny gazety amin'ny teny malagasy iray nivoaka androany 3 janoary ity fanambarana ity.
RAHARAHA VIVA : TODIKA AMIN'NY FILAMINAM-BAHOAKA SY NY FAHALALAHANA MITENY
Ny asabotsy 13 desambra 2008 tokony ho tamin'ny 8 ora alina, ny Antokona fahitalavitra VIVA dia nandefa nandritra ny 45 minitra raki-peo sy sarin'i Didier Ratsiraka, filohan'ny Repoblika teo aloha; tokony ho tamin'ny 11 ora alina, tonga tao amin'ny toeran'ny fahitalavitra ny olon'ny mpitandro ny filaminana mba hanao ny fanakatonana azy. Teny amin'izy ireo ny fanapahan-kevitry ny Minisitry ny fifandraisan-davitra, ny Paositra ary ny fifandraisana, Filohan'ny Vaomiera manokana amin'ny Fifandraisana amin'ny haino amanjery, izay toy izao no sorany: " Tohin'ny fandefasana tamin'ny antokona fahitalavitra VIVA ny raki-peo sy sary misy ny tenin'ny filoham-panjakana teo aloha Didier Ratsiraka mialokaloka any Frantsa tao amin'ny vaovao an-tsariny ny asabotsy 13 desambra 2008 tokony ho tamin'ny 8 ora alina, izay teny mety manohintohina sy ny fandaminana sy ny filaminam-bahoaka, ny antokona fahitalavitra VIVA dia voarara tsy hiely".
Manoloana io toe-javatra io, ny SeFaFi dia manaitra ny manampahefana, sy ny hevitry ny olom-pirenena koa, eo amin'ny loza mety hitranga mazava amin'ny fahalalahan'ny olom-pirenena izay miharihary ankehitriny eto amin'ny firenena. Satria ny SeFaFi dia manohana ny soatoavina demokratika hatramin'ny niorenany, manohitra amin'ny zava-mitranga mety hanohintohina ny fahafahana sy ny zon'ny olom-pirenena ; ivelan'ny olona sy ny rafitra, izy dia miaro ny soatoavina iraisan'ny eran-tany izay nirotsahan'i Madagasikara.
Tokony ho tsiahivina eto ve fa ny fandraisana anjara voalohan'ny SeFaFi, tamin'ny 2001, dia niompana tamin'ny fiarovana ny fahalalahana mivory ? Ny ben'ny tananan'Antananarivo Atoa Ravalomanana Marc, dia nikasa tamin'izany nanao fihetsiketsehana, noho ny 1 mey, ny fankalazana mahazatra ny fetin'ny asa teo amin'ny kianjan'ny 13 mey, fa nifandona tamin'ny fanoheran'ny Prefen'ny polisy. Ny 28 avrily 2001, ny SeFaFi dia nandefa tamin'io farany io taratasy maneho ny fiahiahiany mikasika ny fampiharana ny zo hivory sy ny fihetsiketsehana, izay samy iantohan'ny Lalampanorenana sy ny fifanarahana iraisam-pirenena neken'i Madagasikara. Ny dika mitovy amin'io taratasy io dia nalefa tamin'ny ben'ny tanàna. Nony tonga ny andron'ny 1 mey, dia nanapakevitra ny ben'ny tanàna mba hisorohana ny fifandonana amin'ny polisy ka namindra ny toerana nanaovana ny fihetsiketsehana teny amin'ny kianjan'Ambohijatovo ; teo ankilany, ny Prefe dia nanaiky fa ny filaharan'ny mpiasa dia atao amin'ny lalana manamorona ny kianjan'ny 13 mey ary delegasiona iray no mametraka fehezam-boninkazo famantarana eo amin'ny toerana. Manampy amin'ny famahana ny olan'ny mpifanandrina amin'ny alalan'ny marimaritra iraisana tsy an'ady sy ampandinihana no isan'ny antom-pisian'ny SeFaFi.
Fahahalahana miteny sy fahalalahana fototra momba- ny filaminambahoaka:
Ny fahalalahana miteny, miaraka amin'ny fahalalahana manao fivoriana sy ny fivezivezena, dia isan'reo fahalalahana fototra voafaritra sy arovan'ny Dina iraisam-pirenena momba ny Zon'olombelona, ny Fifanekena iraisam-pirenena momba ny zon'ny Isam-batan'olona sy Zo Politika, ny Dina afrikana momba ny Zon'ny olombelona sy ny vahoaka, ny rijan-teny fototra izay nataon'i Madagasikara sonia sy nekeny ary heverin'ny Lalampanorenantsika ao amin'ny Savaranonando fa « samy raisina ho isan'ny lalàna velona ». Ny andininy 10 amin'ny Lalampanorenana dia miantoka ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalahana amin'ny fifandraisana, ny fahalalahana amin'ny fanaovan-gazety, ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na hanorina fikambanana, ny fahalalahana hivory, ny fahalalahana mivezivezy, ny fahalalahana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana. Fanampin'izany, ny andininy 11 dia manaiky fa manan-jo hahalala vaovao ny tsirairay. Ny fanohintohinana amin'ireo fahalalahana fototra ireo, na dia kely aza, dia midika fandikana ny Lalampanorenana, izay ny Filohan'ny Repoblika no mitandro ny fanajana azy. (Andininy 44 amin'ny Lalampanorenana).
Ny fahalalahana miteny dia tokony iantohana ho an'ny olom-pirenena rehetra, ary koa ho an'ny vondron'olona, indrindra fa ho an'ny sampana misahana ny asan-gazety izay manana iraka hampahalala vaovao sy hitaiza ny mponina amin'ny maha tompon'andraikitra feno sy amin'ny fomba matihanina. Amin'io sehatra io, tsy maintsy ambara fa i Madagasikara dia mbola tsy manana ihany Sata mifehy ny Fifandraisana izay manaraka ny vanim-potoana, ka izay no mahatonga ny fibirioka na avy amin'ny Manampahefana na avy amin'ny mpanao gazety.
Ny fitoviana manoloana ny lalàna dia foto-kevitra iray lehibe tokony ho hajain'ny Fanjakana demokratika rehetra izay, indrisy, tsy mbola mihatra tanteraka eto Madagasikara. Inona, ohatra, no ambara amin'ny ampihimamban'ny fandrakofana nasionaly tanan'ny antokom-panjakana mpampita vaovao tamin'ny fotoan'androny izay manaiky fa ny fifandraisana dia fitaovana tena ilaina amin'ny fampandrosoana ? Ary inona no ambara amin'ny antoko tsy miankina MBS izay mampiely ny fandaharany manerana ny tany malagasy ka tsy miraharaha izay fandraràna, atao fialofana ny fanandramana teknika nohalavaina hatramin'ny 2002 ? Io fanavakavahana misy fironana io dia manaratsy ny tontolo politika, ny tontolon'ny ara-dalàna sy ny tontolon'ny fampitam-baovao eto amin'ny firenena.
Ny fanapahan-kevitra miteraka io fanoheran'ny SeFaFi io dia milaza ny fitandrovana ny filaminam-bahoaka ho tahaka ny iray amin'ny antony na ny tena antony misongadina- notsiahivina mba hanamarinana ny fanakatonana ny antokona fahitalavitra VIVA. Ilaina izany ny mitondra fanazavana sasany momba ny fahalalana fototra mikasika ny filaminam-bahoaka. Ny zo sy ny fahalalahana fototry ny olona dia azo fehezina amina ohatra mazava izay nofaritana tany Syracuse tamin'ny avrily sy mey 1984, teo ambany fiahian'ny foiben'ny Firenena mikambana momba ny Zon'Olombelona. Ireto avy ny fepetra mamehy izany: ny filaminam-bahoaka, ny fahasalamam-bahoaka, ny moralin'ny olom-pirenena, ny fiantohana ny filaminana nasionaly sy ny fitandroam-pilaminam-pirenena, ny zo sy ny fahalalahan'ny hafa, ny zo na lazan'ny hafa ary ny fepetra amin'ny fanaovana dokam-barotra amin'ny fitsarana. Ny filaminam-bahoaka izany dia mifandraika amin'ny vondrom-pitsipika izay miantoka ny fihodihan'ny fiarahamonina, ary amin'ny fitambaran'ny foto-kevitra fototra izay iankinan'ny fiarahamonina. Amin'io lafiny io, ny fanajana ny zon'olombelona dia ao anatin'ny filaminam-bahoaka. Amin'ny Fanjakana demokratika na izay te ho demokratika, ny fahalalana fototra momba ny filaminam-bahoaka dia natao tery araka izay azo atao ary ny famerana ny fahalalahana noho ny antony manohintohina ny filaminam-bahoaka dia hatao eo ambany fanaraha-mason'ny tribonaly tsy miankina.
Ny manampahefana dia manombana fa ny fampielezana ny tenin'ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka dia mety hanohintohina ny hevi-bahoaka. Fa ny firotorotoana nasehon'ny Minisitry ny fifandraisan-davitra, ny Paositra ary ny fifandraisana ka nakany fanapahan-kevitra hanakatona ny antokona fahitaiavitra VIVA dia mampiseho indrindra ny tsy fisian'ny fandinihana lalina eo amin'ny fiantefan'ny fanapahan-kevitra. Tena misy marina ve ny loza mety hitranga manohintohina ny filaminam-bahoaka, kanefa nisy fampitambaovao hafa efa namoaka ampahany tamin'io kabary io fa tsy nisy resaka fanasaziana ? Inona no hevitra omena, ankehitriny, ny antsoina hoe fahalalahana miteny" ? Ary raha ny mety ho loharanon'ny fanohintohina na dia tsy ny anton'ny fanapahan-kevitra avy amin'ny minisitra, fa io fanapahàn-kevitra io ihany ?
Amin'io toejavatra io, ny SeFaFi dia miantso ny olona rehetra (fanjakana, tsy miankina ary olom-pirenena tsotra) eo amin'ny fiaraha-monina malagasy mba hanaja ny soatoavina demokratika izay mandrafitra ny fototry ny Fanjakana tan-dalana. Miantso ny fahefam-panjakana izy mba handray indray miaraka amin'ny fanajana ny soatoavina demokratika nentin'ny fihetseham-bahoaka tamin'ny 1991 sy tamin'ny 2002. Tsy fotoanan'ny kabary soa intsony izao fa ny asa mivaingana. Ity vanim-potoanan'ny fety ity anie hanome ny tsirairay fieritreretana momba ny zava-nitranga farany, mba hanarenana eo anatrehan'ny fahalalana tsara ny antonjavatra ny hadisoana na ny fikorontanana mety hisy.
Antanarivo, faha 24 desambra 2008
Nadikan'i jentilisa 03 janoary 2009